Nativefier + Electron = Webhu → app | Linux Addicts
Isaac | 20/05/2022 07:37 | Sisitimu Yekutonga, Zvirongwa
Chokwadi makanzwa nezveErekitironi, uye zvakare kubva kuNativefier. Isoftware inokwanisa kushandura mawebhusaiti ako aunofarira kuita app kuti iite zvakasununguka, asi haigone kufambiswa munharaunda, sezvo Indaneti ichiri kudiwa kuti sevhisi yewebhu ishande. Ingori nzira ye "kuputira" webhu muchimiro cheapp, uye unogona kuzviita nechero webhusaiti, kubva kubhurogi kuti uiverenge, kuenda kuwebhu app seCanva, kuburikidza neGoogle Docs, nezvimwe.
Kuti uite izvi, mune ino tutorial tinokuratidza kuti ungaita sei gadza uye shandisa nenzira iri nyore uye yakatsanangurwa nhanho nhanho (muDEB distros yereferensi, asi unogona kuzviita mune chero imwe uchishandisa iyo yemuno pasuru maneja):
Zvino zvayakaiswa, chinotevera kugadzira a URL yakavakirwa Electron furemu zvaunoda neNativefier. Kuti uite izvi, iwe unongofanirwa kutevedzera 2 nhanho dziri nyore:
Vhura browser yako uye tsvaga webhusaiti yaunoda kugadzira app. Zvino, mubhurawuza kero kero, kopira iyo URL.
Muhwindo rekupedzisira shandisa Nativefier kugadzira iyo yakakosha app uchishandisa iyo URL. Kwazvo:
Zviripachena, iwe uchafanirwa kutsiva iyo URL neiyo yawakakopa mune yako uye zita rine zita raunoda kupa iyo app. Iwe unogona zvakare kushandura dhizaini, kunyangwe iyo yakawanda inoshandisa x86.
Mushure mekuita murairo uyu, Nativefier inosanganisira iyo URL yawakaisa muElectron app. Kana zvese zvakabudirira, hapana meseji yekukanganisa ichaonekwa mune terminal. Uye kana chimwe chinhu chakaitika, chichakuudza zvakaitika. Kana wapedza, unogona kuwana iyo app uye wotanga kuishandisa nenzira iri nyore:
Muzita unofanira kuisa zita rawakapa app yako kuti riite. Iye zvino unofanira kungonakidzwa nazvo, asi yeuka kuti unofanira kuva neInternet kuti ukwanise kuishandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Nativefier + Electron = Webhu → app
Diego Ospina akadaro
Zviri nyore kuisa saiti sekushandisa neEdge uye ndizvozvo
Pindura kuna Diego Ospina